कोरोनाले बीउबिजनमा ल्याएका समस्या कसरी समाधान गर्ने? :: Setopati
प्रिती कायस्थ कात्तिक १३
कृषि व्यवसायमा बीउबिजनको व्यवस्थापन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो। बीउ उत्पादनमा उचित ध्‍यान दिन सकिएन भने यसले बाली उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्छ नै। साथै राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रले पनि ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्छ।
त्यसकारण बीउको सहज उपलब्धता, किसान समाजसम्म पुर्‍याउन पर्ने सुविधा र उन्नत बीउको आवश्यकताको सधैं टड्कारो रहन्छ।
नेपालमा बीउ उत्पादन क्षेत्रमा आफ्नै प्रयोगशाला र भरपर्दा उत्पादन कम्पनी छैनन्। कृषि व्यवसायमा बीउ, मल तथा रसायनका लागि सधैं अरु देशको भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ। यो साल कोरोनाले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। यो महामारीका कारण किसानले राम्रो बीउ पाउन सकेका छैनन्। पाए पनि अपुग पाइएका बीउको गुणस्तर खस्किएको देखिन्छ।
महामारीका कारण धेरै कालसम्म आन्तरिक तथा बाह्य यातायात ठप्पै भएको थियो। जसकारण विदेशबाट बीउ आयात गर्न सम्भव भएन। विदेशी बीउमा अत्यधिक निर्भरताका कारण यो समस्या उब्जिएको हो। साथै देशभित्र पनि यातायात तथा बजार ठप्प हुनाले आन्तरिक बीउ व्यवस्थापन पनि लथालिंग भयो।
अधिकांश किसानले आफूसँग भएको स्थानीय रुपमा पाइने असुधारिएका बीउको भरमा खेती गर्नु पर्दा उत्पादनमा ह्रास आउने निश्चित छ। अझ गम्भीर समस्या यो छ कि विगत धेरै वर्षदेखि हाइब्रिड बीउ प्रयोग गरिएका जमिनमा ती बीउ उत्पादन हुन्छ-हुँदैन, ठेगान छैन।
कोरोनाका कारणले मल आईनपुग्दा समयमै बीउ प्रयोग गर्न कठिन भइदियो र बीउको म्याद नाघ्दा कयौं बीउ बिग्रेको पनि पाइयो। यसरी बजारमा बीउ अभाव भएकाले धेरैले महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य भए। यस्तो महँगो बाली लगाउँदा उत्पादन मूल्य अत्यधिक हुन जान्छ र किसान सधैं मर्कामा पर्नेछन्। उपभोक्ताले महँगोमा किन्नु पर्दा देशमा भोकमरी आउने सम्भावना पनि हुन्छ।
यी थुप्रै समस्या पर्दा पनि यस महामारीका कारण गाउँ-घरका सोझा किसानले सम्बन्धित निकाय समक्ष गुनासो पोख्ने उचित माध्यम पाएका छैनन्। त्येसैले नेपाली किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न बीउको भण्डारण, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र प्रयोगशाला विकास गर्न अति आवश्यक छ। अनि मात्र किसानले उन्नत स्तरका बीउ पाउन सक्छन् र कुनै पनि बेला आइपर्न सक्ने बीउ सम्बन्धित समस्यासँग झेल्न सक्छन्।
विदेशबाट आयात गरिएका बीउको उचित परीक्षण गरिनुपर्छ ताकि किसानसमक्ष उच्च गुणस्तरका बीउ मात्र पुगून्। बीउ उत्पादन, प्रवर्द्धन र गुणस्तरीयता मापन गर्न सरकारको सीमित प्रयासले मात्र खर्च धान्न नसक्ने हुनाले निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा राम्रो नीतिका साथ सहुलियत दाना प्रदान गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अनि मात्र किसानले राहत पाउँछन्।
सरकारले यस्तो अपर्झट आई पर्ने समस्याका लागि छुट्टै भण्डारण व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ। यस्तो महामारी बेला अनलाइन सूचना तथा कारोबार गर्न सके एक ठाउँको बीउबारे अर्को ठाउँका किसानले थाहा पाएर ओसारपसार गर्न सजिलो हुन जान्छ।
अनलाइन सेवालाई अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सकियो भने यसले धेरै समस्याको समाधान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। कृषि क्षेत्रमा भएका आधुनिकीकरण र नयाँ-नयाँ प्रविधिका बारेमा ज्ञान दिने रेडियो तथा टि.भी. बाट प्रसारण कार्यक्रममा पनि जोड दिन सकिन्छ।
(प्रिती कायस्थ कृषिमा विषयमा स्नातक अध्ययनरत छन्।)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कात्तिक १३, २०७७, ०६:०५:००